जोड्दै छ पठनपाठनलाई प्रविधिले | suryakhabar.com
नेपाली सेना नागरिकको आस्था र भरोसाको केन्द्रविन्दुः प्रधानसेनापति थापा
गुटबन्दी/अदुरदर्शीताका कारण काँग्रेस/नेकपाको भविश्य नै अन्योलमा, अरुको हालत के होला ?
चरित्रहत्याको आरोपसहित गच्छदारको गृह जिल्लामा ओली सरकार विरुद्ध कांग्रेसको आन्दोलन !
चीनबाट ल्याइएका विद्यार्थीलाई यी चार ठाउँमा राखिने, सीधै घर जान नपाउने !
बिष्णु/बाबुराम/माधव/लिलामणीलाई पनि पक्रेर जग्गा घोटालामा कारबाही गर्न तरुण दलको चुनौती
Home शिक्षा जोड्दै छ पठनपाठनलाई प्रविधिले
जोड्दै छ पठनपाठनलाई प्रविधिले
on: २३ माघ २०७६, बिहीबार ०९:४५ In: शिक्षा, सूचना प्रविधिTags: No Comments
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीमा अवस्थित सर्वोदय माविले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर पठनपाठन शुरुआत गरेको छ । अहिले इ शिक्षा (टेलीटिचिङ) प्रविधिबाट कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई सोमबार र मङ्गलबार एक÷एक घण्टा दक्षिण कोरियाबाट प्रकाश धमलाल पढाउने गरेका छन् ।
अध्ययनका लागि त्यहाँ पुगेका उनले भाषा र संस्कृतिको बारेमा विद्यार्थीलाई सिकाउने बताइएको छ । टेलीटिचिङ कक्षा सञ्चालन गर्न दक्षिण कोरियाको टेलिकमले विद्यालयको एउटा कोठामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला तयार गरिदिएको छ ।
कक्षा कोठाको अगाडि ७२ इञ्जको एलइडी मनिटर राखिएको छ । छेउमा वेभ क्यामेरा जडान गरिएको छ । इन्टरनेट जडान गरेपछि वेभ क्यामेराको माध्यमबाट सिकाउने गरेको कम्प्युटर शिक्षक टकबहादुर पुनले जानकारी दिएका छन् ।
‘टेलीटिचिङ गराउन पाँच एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट जोडेका छौँ”, उनले भने, “वेभ क्यामेरा र इन्टरनेटबाट फरक फरक ठाउँमा भएका शिक्षक र विद्यार्थीले साक्षात्कार गरेर पढ्छन् ।” एलइडीको पर्दामा शिक्षक र विद्यार्थीको दृष्य एक अर्काले देख्न सक्छन् ।
आवाज पनि सुनिन्छ । आमनेसामने भए जसरी नै कुराकानी गर्छन् । कक्षा ११ का २२ र १२ का १९ विद्यार्थी टेलीटिचिङमा सहभागी भएका छन् । भौगोलिक हिसाबले धेरै टाढा भएका शिक्षकले पनि गाउँमा रहेका विद्यालयमा पढाउँदा दङ्ग परेको विद्यार्थी सनम सुनारले बताए ।
छात्रा सन्ध्या श्रेष्ठले कक्षा कोठामा शिक्षकको भौतिक उपस्थिति जस्तै हुने अनुभव सुनाएका छन् । पर्दामा पुस्तकका साथै दृष्य हेर्दै र अडियो सुन्दै पढ्दा समय बितेको पत्तै नहुने कक्षा ११ का गौतम विकले बताए । दक्षिण कोरियाको भाषा, संस्कृति र रहनसहनको बारेमा पढीरहेका छन् ।
कक्षा कोठामा शिक्षकको भौतिक उपस्थिति बिनै प्रविधिको प्रयोग गरेर फरक ठाउबाट पनि पढाउन सकिने विद्यालयका प्रअ किसन पुनले बताए । “अहिले परीक्षणको क्रममा छौँ”, उनले भने “विषयगत शिक्षक नभएको विद्यालयमा टेलीटिचिङबाट पढाउन सकिन्छ ।” विद्यार्थीको पढाइप्रति रुचि बढेको छ ।
विद्यालयलाई टेलीटिचिङका साथै भवन र कम्प्युटर ल्याब सञ्चालन गर्न पनि दक्षिण कोरियाको अम हङ गिल फाउण्डेशनले सहयोग गरेको छ । मासिक रु २७ हजार इन्टरनेटको शुल्क तिर्न पनि संस्थाले नै सहयोग गरेको छ ।
फाउण्डेशनको सहयोगमा नौ कोठे भवन निर्माण भएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वुद्धि पुनले बताएका छन् । यसअघि १६ ल्यापटप सहयोग गरेको संस्थाले थप २१ उपलब्ध गराउन लागेको छ । कक्षा ६ देखि ९ सम्म कम्प्युटर विषयको पठनपाठन हुन्छ ।
कक्षा १ र २ मा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने गरिएको सहायक प्रअ गोविन्द थापाले जानकारी दिएका छन् । कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने सो विद्यालयमा २६१ विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् ।
आठ हजारमाथिका सबै हिमाल चढेका दक्षिण कोरियन नागरिक अम हङ गिलले फाउण्डेशन स्थापना गरेका थिए । सो फाउण्डेशनले नेपालका १६ विद्यालयमा पूर्वाधार र प्रविधि सहयोग गरेको जनाएको छ ।
वाग्मती प्रदेशले पनि साझा यातायातलाई पैसा नदिने
अध्यक्ष प्रचण्ड र बेलायती राजदूत पोलिटबीच भेटवार्ता
एनसेलले ल्यायो ‘भ्यालेन्टाइन अफर’,
२३ माघ २०७६, बिहीबार २१:१८
प्रविधिलाई दैनिक जीवनसँग जोड्न आग्रह
२३ माघ २०७६, बिहीबार ०९:०६
प्रवक्ता आचार्यको टिप्पणीः काममा सिन्को नभाँच्ने ओली सरकारको भाषण मात्रै ठुलो !
२३ माघ २०७६, बिहीबार ०८:१२
काठमाडौं मेडिकल कजेजले गार्ये २४२ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच
यातायात ब्यबस्थापन कार्यलयमा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालन
टीका प्रसाई र बीरेन्द्र श्रेष्ठको “पिरती नाप्ने के ले हो” सार्वजनिक(भिडियो सहित)
घर तथा गाडी कर्जाका लागि मेगा बैंकले ल्यायो आकर्षक योजना
पौडेलको आक्रोशः गच्छेदारलाई मुद्धा तर विष्णु/माधव/भट्टराईलाई कम्युनिष्ट भएकै कारण उन्मुक्ती किन ?
२३ माघ २०७६, बिहीबार २१:०४
हलिउडका सुप्रसिद्ध कलाकार कर्क डग्लसको निधन
२३ माघ २०७६, बिहीबार १८:०८
चलचित्र प्रेमगीत ३ को पहिलो गीत “हात्ती ढुंगामा” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
२१ माघ २०७६, मंगलवार १९:४६
अष्ट्रेलियाबाटै प्रबिन्दले निर्देशन गरे ‘बन्दकी’ (भिडियो सहित)
२१ माघ २०७६, मंगलवार १९:३८
प्रकाश कटुवाल र सपना थापाको “लौरी गोगनको” सार्वजनिक (भिडियोसहित)
२० माघ २०७६, सोमबार १९:२८
२३ माघ २०७६, बिहीबार २१:१३
कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५६३ पुग्यो, चीनभर २८ हजार व्यक्ति सङ्क्रमित
२३ माघ २०७६, बिहीबार १७:१५
किन लगाईयो एकाबिहानै लुम्बिनी अस्पतालका सटरहरुमा डोजर ? यस्तो छ कारण !
२३ माघ २०७६, बिहीबार ११:४१
सुन्दर नर्सले सडकमै केटाहरुको गुप्तांग समाउँदै हिडेपछि केटाहरु छक्क !
१८ माघ २०७६, शनिबार १९:५४
२३ माघ २०७६, बिहीबार ०९:४५